Hybrid နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ | CarsDB
Hybrid နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ
မော်တော်ယာဉ်မူဝါဒ ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်အတူ မော်ဒယ်လ်မြင့်ကားများ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ Hybrid ကားများကို ယနေ့ရန်ကုန်မြို့ နေရာအနှံ့အပြားတွင် မြင်တွေ့နိုင်ကြပါပြီ။ သာမာန်ကားများထက် နည်းပညာမြင့်မားပြီး ဆီစားနှုန်း အထူးသက်သာသော၊ ပြင်ဆင်စရိတ် နည်းပါးသော အားသာချက်များသည် ဟိုက်ဘရစ်ကားများကို နာမည်ကျော် လူကြိုက်များစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ပြင် ဟိုက်ဘရစ်ကားသည် Emission ထုတ်လွှတ်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု အသက်သာဆုံးကားဖြစ်သည်။
Hybrid ကားဆိုသည်မှာ I.C. E အင်ဂျင် အသေးတစ်လုံးနှင့် လျှပ်စစ်မော်တာတစ်လုံး ပူးတွဲပါဝင်ပြီး ပါဝါစွမ်းအားကို နည်းလမ်း (၂) မျိုးဖြင့် အမြင့်မားဆုံး ရရှိစေသော ကားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Hybrid ကား၏ထူးခြားချက်မှာ လောင်စာဆီ စားနှုန်း သက်သာသဖြင့် Fuel Economy ဖြစ်သည်။ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု သိသာစွာ လျော့နည်းသွားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မိတ်ဖက်ဖြစ်သော Green Car ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး Hybrid လျှပ်စစ်ကားကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်၍ စိတ်ကူး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူမှာ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူ (Ferdinand Porsche) ဖာဒီနန်ပေါ့ချေးဖြစ်သည်။ (၁၉၀၁) ခု နှစ်မှ (၁၉၀၅) အတွင်းကြိုးပမ်းတီထွင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ဟိုက်ဘရစ်ကားများ ဆက်ဆက်မရှင်သန်ခဲ့ဘဲ (၂၀) ရာစု ကုန်ခါနီးမှ ခေတ်သစ် ဟိုက်ဘရစ်ကား များပေါ်ပေါက်လာသည်။
အမေရိကန် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သူ Victor Wouk ဆိုသူ စမ်းသပ်သုတေသနပြုလုပ်၍ ကွန်ပျူတာ စနစ်ပါသော ခေတ်သစ်ဟိုက်ဘရစ် ကားကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Victor Wouk ကို ခေတ်သစ် ဟိုက်ဘရစ်ကား၏ ဖခင် (The Godfather of the Hybrid) ဟုလူသိများလာသည်။ (၁၉၈၉) ခုနှစ်တွင် Audi 100 Avant Duo ကားသည် ပထမဆုံးခေတ်သစ် ဟိုက်ဘရစ်ကား ဖြစ်လာသည်။
(၁၉၉၇) ခုနှစ်တွင် Toyota က Prius မော်ဒယ်လ်ကားဖြင့် ခေတ်သစ် Hybrid ကားကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ Honda ကားကုမ္ပဏီကလည်း (၁၉၉၉) ခုနှစ်တွင် ၎င်းင်း၏ Honda Insight (99 Model) ကားဖြင့် Hybrid နည်းပညာကို ပြသခဲ့သည်။ (၂၁)ရာစု၏ ပထမ (၁၀) စုနှစ်များ တွင် Hybrid နည်းပညာရပ်များ တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။
ရေနံဈေးနှုန်းများ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခြင်း၊ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူနွေးလာခြင်း၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျော့ချရေးနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု လျော့ချရေး အသံများ ပိုမိုကျယ်လောင်လာခြင်း၊ ဆီစားနှုန်းသက် သာသော Fuel Economy ဖြစ်သော ကားများထုတ်လုပ်ရေးကို ပိုမို တွန်းအားပေးသော အချိန်အခါ ဖြစ်လာခြင်းစသော အကြောင်းများကြောင့် မျက်မှောက်ကာလတွင် Hybrid နည်း ပညာသုံးကားများ ပိုမိုရေပန်းစား လူကြိုက်ပိုများလာသည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကား ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့် လျှပ်စစ်မော်တာ (၂) မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားသောကား ဟုအကြမ်းအားဖြင့် ပြောနိုင်ပါသည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်မှာ သာမန်ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ကားများတွင်ပါသော အင်ဂျင်အရွယ်အစားထက် သေးငယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြေပြင်ညီလမ်းကောင်း တစ်ခုပေါ်တွင် ရွေ့လျားမောင်းနှင်နေသော ကားတစ်စီးအတွက် ပါဝါစွမ်းအင်လို အပ်ချက်မှာ မြင်းကောင်ရေ (၁၀) မှ (၂၀) အတွင်းသာဖြစ်သည်။
သို့သော် ကားအင်ဂျင်အများစုသည် မြင်းကောင်ရေစွမ်းအား (၈၀) မှ (၂၀၀) အထိ တပ်ဆင်သုံးစွဲကြသည်။ စတင်ထွက်ခွာခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ တောင်တက်လမ်း၊ တောင်ပေါ်လမ်းများတွင် ရုန်းတက်ရခြင်း၊ ကားကျော်တက်ခြင်း စသော အခြေအနေများ၌သာ အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေစွမ်းအားများစွာ လိုအပ်ပြီး ပုံမှန် Speed ဖြင့် မောင်းနေသော အချိန်တွင် မြင်းကောင်ရေစွမ်းအား အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။
သာမာန်အခြေအနေတွင် ပုံမှန် Speed တစ်ခုဖြင့် (80 km/hr - 100 km/hr) သာမောင်းနှင်ရန်အတွက် အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ ကြီးမားနေ ခြင်းသည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်စွမ်းအား လေလွင့် ဆုံးရှုံးခြင်းသည် လောင်စာလေလွင့် ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် ဖြေရှင်းထားသည်။ စတင်ထွက်ခွာခြင်း၊ အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ကုန်းတက်လမ်းတွင် မောင်းနေခြင်းများအတွက် အင်ဂျင်စွမ်းအားအပြင် လျှပ်စစ်မော်တာကပါ ပူးပေါင်း ကူညီပေးသည်။ မလိုအပ်သော အခြေအနေတွင် အင်ဂျင်စွမ်းအားကို မသုံးတော့ဘဲ လျှပ်စစ်မော်တာ လှည့်အားဖြင့် ကားကိုဆက်မောင်းစေသည်။
ထို့ကြောင့် လောင်စာဆီချွေတာနိုင်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားများ သည်သာမန်ဓာတ်ဆီကားများထက် သိသာစွာ လောင်စာဆီစားနှုန်း သက်သာကြသည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် သုံးသော လျှပ်စစ်မော်တာအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များများ သိုလှောင် နိုင်သော High Voltage ဘက်ထရီ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားမှ လျှပ်စစ်မော်တာသည် Generator အဖြစ်လည်း အသုံးပြုသည်။ ကားအရှိန်လျှော့သောအချိန်၊ ဘရိတ်နင်းသောအချိန်၊ ကားစက်မသတ်ဘဲ စက်နှိုး၍ရပ်ထားသော အချိန်များတွင် Generator မှ High Voltage ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်း ပေးနေသည်။
ထို့ကြောင့် ဟိုက်ဘရစ်ကားများသည် လျှပ်စစ်ကားတစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် တပ်ဆင်ထားသော အင်ဂျင်သည် သေးငယ်သော်လည်း ခရီးဝေးမိုင်ပေါင်းများစွာ သွားနိုင်ခြင်းသည် ဟိုက်ဘရစ်ကား၏ အဓိက၀ိသေသ လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကား အမျိုးအစားကို Parellel Hybrid, Series Hybrid, Series-parallel Hybridနှင့် Plug-in Hybrid ဟူ၍ အတန်းအစားအမျိုးမျိုးခွဲခြား ထုတ်လုပ်သည်။
ဓာတ်ဆီ-လျှပ်စစ် ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် အဓိကပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
(၁) ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် - သာမန် ဓာတ်ဆီကားအင်ဂျင်ထက် ပိုမိုသေးငယ်သည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ကို အသုံးချထား၍ ဆီစားသက်သာ ပြီး Emission ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသည်။
(၂) Fuel Tank- ဓာတ်ဆီအင် ဂျင်အတွက် ဆီသိုလှောင်ကန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ဆီသည် ဘက်ထရီထက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ပိုများသည်။
(၃) Electric Motor - ဟိုက် ဘရစ်ကားမှ လျှပ်စစ်မော်တာသည် ဆန်းပြားရှုပ်ထွေးသည်။ မော်တာထိန်းချုပ်မှုကို ကွန်ပျူတာက ဆောင်ရွက်သည်။
(၄) Batteries - ဟိုက်ဘရစ် ကားသုံး ဘက်ထရီသည် လျှပ်စစ်စွမ်း အင်ပမာဏများများ သိုလှောင်နိုင်ရမည်။
(၅) Transmission- ဟိုက်ဘရစ်ကားသုံး Transmission စနစ်သည် သာမန်ကားများ ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တချို့သော ဟိုက်ဘရစ်အမျိုးအစား ကားများသည် သာမန်ထက်ထူးခြား စွာတည်ဆောက်ထားသည်။
ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၏ ကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူကြိုက်ပိုများလာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Hybrid ကားများသည် နည်းပညာ ပိုမိုမြင့်မားလာသဖြင့် လောင်စာဆီ ကုန်ကျစရိတ် အလွန်သက်သာပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်ကလည်း နည်းပါးသည်။ ရေဖြင့်ပင်မောင်းနိုင်သော Water Hybrid ကားများ ပင်ပေါ်ပေါက်နေပါပြီ။ ရေကိုပြိုကွဲစေလျှင် ရေဓာတ်ငွေ့ HHO ထွက်သည်။ ပြိုကွဲသွားသော ရေသည် ဟိုက်ဒဂြိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင် ဓာတ်ငွေ့သာဖြစ်သည်။ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ကို ဓာတ်ဆီနှင့်တွဲဖက်၍ အင်ဂျင်လည်ပတ်ရန် လောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု နည်းပါးခြင်း
ဟိုက်ဘရစ်ကားများသည် မီးခိုးမြူများ ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးသဖြင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုလျော့ချနိုင်သည်။ အမေရိကန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးအေဂျင်စီ (EPA) က ဟိုက်ဘရစ်ကားများကို လေထုညစ်ညမ်းမှု အနည်းဆုံးအတွက် အမြင့်ဆုံး Score အမှတ် (၁၀) တွင် (၉) မှတ်ပေးထားသည်။
(ခ) ဆီစားနှုန်း သက်သာခြင်း
ဟိုက်ဘရစ်ကားတွင် စွမ်းအင် လေလွှင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါး၍ ဆီတစ်ဂါလန်မိုင်နှုန်း မြင့်မားသည်။
(ဂ) သန့်ရှင်းသောလောင်စာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
ဟိုက်ဒြိုဂျင် ဟိုက်ဘရစ်ကား များသည် Fuel Cell ကားများကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသော ဟိုက်ဒြိုဂျင်လောင်စာ ကိုသုံးနိုင်သည်။
(ဃ) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် နည်းပါးခြင်း
ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၏ စွမ်းဆောင်ချက် (Performance) သည် Level တူ အခြားကားများထက် သာလွန်သည်။ တောင်တက်လမ်းများ တွင် ဟိုက်ဘရစ်ကားက ပို၍ကောင်းသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် မော်တော်ကားများ၏ ဆီစားနှုန်းသက်သာရေးကို မူဝါဒချမှတ်၍ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဆိုလာကားများ၊ ဟိုက်ဘရစ်ကားများ တိုးပွားလာရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းစီမံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါသည်။
Photo Detail: 2014 Honda Accord Plug-In Hybrid Engine Look
မျောတျောယာဉျမူဝါဒ ပွောငျးလဲခွငျးမြားနှငျ့အတူ မျောဒယျလျမွငျ့ကားမြား ဝငျရောကျလာခဲ့သညျ။ Hybrid ကားမြားကို ယနရေ့နျကုနျမွို့ နရောအနှံ့အပွားတှငျ မွငျတှနေို့ငျကွပါပွီ။ သာမာနျကားမြားထကျ နညျးပညာမွငျ့မားပွီး ဆီစားနှုနျး အထူးသကျသာသော၊ ပွငျဆငျစရိတျ နညျးပါးသော အားသာခကျြမြားသညျ ဟိုကျဘရဈကားမြားကို နာမညျကြျော လူကွိုကျမြားစခွေငျးဖွဈသညျ။ ထို့ ပွငျ ဟိုကျဘရဈကားသညျ Emission ထုတျလှတျမှု အနညျးဆုံးဖွဈပွီး လထေုညဈညမျးမှု အသကျသာဆုံးကားဖွဈသညျ။
Hybrid ကားဆိုသညျမှာ I.C. E အငျဂငျြ အသေးတဈလုံးနှငျ့ လြှပျစဈမျောတာတဈလုံး ပူးတှဲပါဝငျပွီး ပါဝါစှမျးအားကို နညျးလမျး (၂) မြိုးဖွငျ့ အမွငျ့မားဆုံး ရရှိစသေော ကားအမြိုးအစားဖွဈသညျ။ Hybrid ကား၏ထူးခွားခကျြမှာ လောငျစာဆီ စားနှုနျး သကျသာသဖွငျ့ Fuel Economy ဖွဈသညျ။ ဖနျလုံအိမျ အာနိသငျကို ဖွဈပျေါစသေော ကာဗှနျထုတျလှတျမှု သိသာစှာ လြော့နညျးသှားပွီး သဘာဝပတျဝနျးကငျြအတှကျ မိတျဖကျဖွဈသော Green Car ဖွဈသညျ။
ပထမဆုံး Hybrid လြှပျစဈကားကို ဒီဇိုငျးပွုလုပျ၍ စိတျကူး အကောငျအထညျဖျောခဲ့သူမှာ သွစတွေးလနြိုငျငံသား ထငျပျေါကြျောကွားသူ (Ferdinand Porsche) ဖာဒီနနျပေါ့ခြေးဖွဈသညျ။ (၁၉ဝ၁) ခု နှဈမှ (၁၉ဝ၅) အတှငျးကွိုးပမျးတီထှငျခဲ့သညျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုး ကွောငျ့ ဟိုကျဘရဈကားမြား ဆကျဆကျမရှငျသနျခဲ့ဘဲ (၂ဝ) ရာစု ကုနျခါနီးမှ ခတျေသဈ ဟိုကျဘရဈကား မြားပျေါပေါကျလာသညျ။
အမရေိကနျ အငျဂငျြနီယာတဈဦးဖွဈသူ Victor Wouk ဆိုသူ စမျးသပျသုတသေနပွုလုပျ၍ ကှနျပြူတာ စနဈပါသော ခတျေသဈဟိုကျဘရဈ ကားကိုမှေးဖှားပေးခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ Victor Wouk ကို ခတျေသဈ ဟိုကျဘရဈကား၏ ဖခငျ (The Godfather of the Hybrid) ဟုလူသိမြားလာသညျ။ (၁၉၈၉) ခုနှဈတှငျ Audi 100 Avant Duo ကားသညျ ပထမဆုံးခတျေသဈ ဟိုကျဘရဈကား ဖွဈလာသညျ။
(၁၉၉၇) ခုနှဈတှငျ Toyota က Prius မျောဒယျလျကားဖွငျ့ ခတျေသဈ Hybrid ကားကို မိတျဆကျပွသခဲ့သညျ။ Honda ကားကုမ်ပဏီကလညျး (၁၉၉၉) ခုနှဈတှငျ ၎င်းငျးငျး၏ Honda Insight (99 Model) ကားဖွငျ့ Hybrid နညျးပညာကို ပွသခဲ့သညျ။ (၂၁)ရာစု၏ ပထမ (၁ဝ) စုနှဈမြား တှငျ Hybrid နညျးပညာရပျမြား တဈရှိနျထိုး တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးလာခဲ့သညျ။
ရနေံစြေးနှုနျးမြား တဖွညျးဖွညျး မွငျ့တကျလာခွငျး၊ ဖနျလုံအိမျ အာနိသငျကွောငျ့ ကမ်ဘာကွီးပိုမိုပူနှေးလာခွငျး၊ ကာဗှနျထုတျလှတျမှု လြော့ခရြေးနှငျ့ လထေုညဈညမျးမှု လြော့ခရြေး အသံမြား ပိုမိုကယျြလောငျလာခွငျး၊ ဆီစားနှုနျးသကျ သာသော Fuel Economy ဖွဈသော ကားမြားထုတျလုပျရေးကို ပိုမို တှနျးအားပေးသော အခြိနျအခါ ဖွဈလာခွငျးစသော အကွောငျးမြားကွောငျ့ မကျြမှောကျကာလတှငျ Hybrid နညျး ပညာသုံးကားမြား ပိုမိုရပေနျးစား လူကွိုကျပိုမြားလာသညျ။
ဟိုကျဘရဈကား ဆိုသညျမှာ ဓာတျဆီအငျဂငျြနှငျ့ လြှပျစဈမျောတာ (၂) မြိုးကို ပေါငျးစပျထားသောကား ဟုအကွမျးအားဖွငျ့ ပွောနိုငျပါသညျ။ ဟိုကျဘရဈကားတှငျ တပျဆငျထားသော အငျဂငျြမှာ သာမနျဓာတျဆီ၊ ဒီဇယျကားမြားတှငျပါသော အငျဂငျြအရှယျအစားထကျ သေးငယျခွငျးဖွဈသညျ။ မွပွေငျညီလမျးကောငျး တဈခုပျေါတှငျ ရှလြေ့ားမောငျးနှငျနသေော ကားတဈစီးအတှကျ ပါဝါစှမျးအငျလို အပျခကျြမှာ မွငျးကောငျရေ (၁ဝ) မှ (၂ဝ) အတှငျးသာဖွဈသညျ။
သို့သျော ကားအငျဂငျြအမြားစုသညျ မွငျးကောငျရစှေမျးအား (၈ဝ) မှ (၂ဝဝ) အထိ တပျဆငျသုံးစှဲကွသညျ။ စတငျထှကျခှာခွငျး၊ အရှိနျမွှငျ့တငျခွငျး၊ တောငျတကျလမျး၊ တောငျပျေါလမျးမြားတှငျ ရုနျးတကျရခွငျး၊ ကားကြျောတကျခွငျး စသော အခွအေနမြေား၌သာ အငျဂငျြမွငျးကောငျရစှေမျးအားမြားစှာ လိုအပျပွီး ပုံမှနျ Speed ဖွငျ့ မောငျးနသေော အခြိနျတှငျ မွငျးကောငျရစှေမျးအား အနညျးငယျသာ လိုအပျသညျ။
သာမာနျအခွအေနတှေငျ ပုံမှနျ Speed တဈခုဖွငျ့ (80 km/hr - 100 km/hr) သာမောငျးနှငျရနျအတှကျ အငျဂငျြမွငျးကောငျရေ ကွီးမားနေ ခွငျးသညျ စှမျးအငျဆုံးရှုံးမှုတဈရပျဖွဈသညျ။ အငျဂငျြစှမျးအား လလှေငျ့ ဆုံးရှုံးခွငျးသညျ လောငျစာလလှေငျ့ ဆုံးရှုံးခွငျး ဖွဈသညျ။ ဤအခကျြကို ဟိုကျဘရဈကားတှငျ ဖွရှေငျးထားသညျ။ စတငျထှကျခှာခွငျး၊ အရှိနျမွှငျ့တငျခွငျး၊ ကုနျးတကျလမျးတှငျ မောငျးနခွေငျးမြားအတှကျ အငျဂငျြစှမျးအားအပွငျ လြှပျစဈမျောတာကပါ ပူးပေါငျး ကူညီပေးသညျ။ မလိုအပျသော အခွအေနတှေငျ အငျဂငျြစှမျးအားကို မသုံးတော့ဘဲ လြှပျစဈမျောတာ လှညျ့အားဖွငျ့ ကားကိုဆကျမောငျးစသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ လောငျစာဆီခြှတောနိုငျသညျ။ ဟိုကျဘရဈကားမြား သညျသာမနျဓာတျဆီကားမြားထကျ သိသာစှာ လောငျစာဆီစားနှုနျး သကျသာကွသညျ။ ဟိုကျဘရဈကားတှငျ သုံးသော လြှပျစဈမျောတာအတှကျ လြှပျစဈစှမျးအငျမြားမြား သိုလှောငျ နိုငျသော High Voltage ဘကျထရီ သီးသနျ့တပျဆငျထားသညျ။ ဟိုကျဘရဈကားမှ လြှပျစဈမျောတာသညျ Generator အဖွဈလညျး အသုံးပွုသညျ။ ကားအရှိနျလြှော့သောအခြိနျ၊ ဘရိတျနငျးသောအခြိနျ၊ ကားစကျမသတျဘဲ စကျနှိုး၍ရပျထားသော အခြိနျမြားတှငျ Generator မှ High Voltage ဘကျထရီကို အားပွနျသှငျး ပေးနသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဟိုကျဘရဈကားမြားသညျ လြှပျစဈကားတဈပိုငျးဖွဈသညျ။ ဟိုကျဘရဈကားတှငျ တပျဆငျထားသော အငျဂငျြသညျ သေးငယျသျောလညျး ခရီးဝေးမိုငျပေါငျးမြားစှာ သှားနိုငျခွငျးသညျ ဟိုကျဘရဈကား၏ အဓိကဝိသသေ လက်ခဏာဖွဈသညျ။
ဟိုကျဘရဈကား အမြိုးအစားကို Parellel Hybrid, Series Hybrid, Series-parallel Hybridနှငျ့ Plug-in Hybrid ဟူ၍ အတနျးအစားအမြိုးမြိုးခှဲခွား ထုတျလုပျသညျ။
ဓာတျဆီ-လြှပျစဈ ဟိုကျဘရဈကားတှငျ အဓိကပါဝငျသော အစိတျအပိုငျးမြား
(၁) ဓာတျဆီအငျဂငျြ - သာမနျ ဓာတျဆီကားအငျဂငျြထကျ ပိုမိုသေးငယျသညျ။ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာမြား ကို အသုံးခထြား၍ ဆီစားသကျသာ ပွီး Emission ထုတျလှတျမှုနညျးသညျ။
(၂) Fuel Tank- ဓာတျဆီအငျ ဂငျြအတှကျ ဆီသိုလှောငျကနျဖွဈသညျ။ ဓာတျဆီသညျ ဘကျထရီထကျ စှမျးအငျသိပျသညျးဆ ပိုမြားသညျ။
(၃) Electric Motor - ဟိုကျ ဘရဈကားမှ လြှပျစဈမျောတာသညျ ဆနျးပွားရှုပျထှေးသညျ။ မျောတာထိနျးခြုပျမှုကို ကှနျပြူတာက ဆောငျရှကျသညျ။
(၄) Batteries - ဟိုကျဘရဈ ကားသုံး ဘကျထရီသညျ လြှပျစဈစှမျး အငျပမာဏမြားမြား သိုလှောငျနိုငျရမညျ။
(၅) Transmission- ဟိုကျဘရဈကားသုံး Transmission စနဈသညျ သာမနျကားမြား ကဲ့သို့ဖွဈသညျ။ တခြို့သော ဟိုကျဘရဈအမြိုးအစား ကားမြားသညျ သာမနျထကျထူးခွား စှာတညျဆောကျထားသညျ။
ဟိုကျဘရဈကားမြား၏ ကောငျးမှနျသော အကြိုးကြေးဇူးမြား ကွောငျ့နှဈစဉျနှဈတိုငျး လူကွိုကျပိုမြားလာသညျ။ နောကျဆုံးပျေါ Hybrid ကားမြားသညျ နညျးပညာ ပိုမိုမွငျ့မားလာသဖွငျ့ လောငျစာဆီ ကုနျကစြရိတျ အလှနျသကျသာပွီး ပွုပွငျထိနျးသိမျးမှု စရိတျကလညျး နညျးပါးသညျ။ ရဖွေငျ့ပငျမောငျးနိုငျသော Water Hybrid ကားမြား ပငျပျေါပေါကျနပေါပွီ။ ရကေိုပွိုကှဲစလြှေငျ ရဓောတျငှေ့ HHO ထှကျသညျ။ ပွိုကှဲသှားသော ရသေညျ ဟိုကျဒဂွိုဂငျြနှငျ့ အောကျဆီဂငျြ ဓာတျငှသေ့ာဖွဈသညျ။ ဟိုကျဒွိုဂငျြကို ဓာတျဆီနှငျ့တှဲဖကျ၍ အငျဂငျြလညျပတျရနျ လောငျစာအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသညျ။
(က) ပတျဝနျးကငျြထိခိုကျမှု နညျးပါးခွငျး
ဟိုကျဘရဈကားမြားသညျ မီးခိုးမွူမြား ထုတျလှတျမှုနညျးပါးသဖွငျ့ လထေုညဈညမျးမှုလြော့ခနြိုငျသညျ။ အမရေိကနျပတျဝနျးကငျြထိနျး သိမျးရေးအဂေငျြစီ (EPA) က ဟိုကျဘရဈကားမြားကို လထေုညဈညမျးမှု အနညျးဆုံးအတှကျ အမွငျ့ဆုံး Score အမှတျ (၁ဝ) တှငျ (၉) မှတျပေးထားသညျ။
(ခ) ဆီစားနှုနျး သကျသာခွငျး
ဟိုကျဘရဈကားတှငျ စှမျးအငျ လလှေငျ့ဆုံးရှုံးမှု နညျးပါး၍ ဆီတဈဂါလနျမိုငျနှုနျး မွငျ့မားသညျ။
(ဂ) သနျ့ရှငျးသောလောငျစာ သုံးစှဲနိုငျခွငျး
ဟိုကျဒွိုဂငျြ ဟိုကျဘရဈကား မြားသညျ Fuel Cell ကားမြားကဲ့သို့ သနျ့ရှငျးသော ဟိုကျဒွိုဂငျြလောငျစာ ကိုသုံးနိုငျသညျ။
(ဃ) ပွုပွငျထိနျးသိမျးစရိတျ နညျးပါးခွငျး
ဟိုကျဘရဈကားမြား၏ စှမျးဆောငျခကျြ (Performance) သညျ Level တူ အခွားကားမြားထကျ သာလှနျသညျ။ တောငျတကျလမျးမြား တှငျ ဟိုကျဘရဈကားက ပို၍ကောငျးသညျ။
ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားတှငျ မျောတျောကားမြား၏ ဆီစားနှုနျးသကျသာရေးကို မူဝါဒခမြှတျ၍ ဦးစားပေး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ။ ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာမှုနှငျ့ လထေုညဈညမျးမှု ကာကှယျရေးအတှကျ လြှပျစဈကားမြား၊ ဆိုလာကားမြား၊ ဟိုကျဘရဈကားမြား တိုးပှားလာရေးအတှကျ နညျးလမျးမြိုးစုံဖွငျ့ ကွိုးပမျးစီမံ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိနပေါသညျ။
Posted at: 13-01-2014 08:53 AM